श्रेष्ठको ‘अवसरवादी चरित्र: वर्षैपिच्छे पार्टी बदल्दै, उम्मेदवार बन्दै... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
श्रेष्ठको ‘अवसरवादी चरित्र: वर्षैपिच्छे पार्टी बदल्दै, उम्मेदवार बन्दै…
दाङ । दाङ जिल्लाको तेस्रो ठूलो उद्योग बाणिज्य संघ देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघ लमहीमा शनिबार ब्यबसायीहरुले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछन् । देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फबाट दुई ब्यबसायीको उम्मेदवारी परेको छ ।
संघको नेतृत्वका लागि नेपाली काँग्रेसले रत्नप्रसाद श्रेष्ठलाई अघि सारेको छ । श्रेष्ठ यसअघि दुई पटक अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार भएर पराजित ब्यक्ति हुन् । यस्तै नेकपा एमालेले थानेश्वर गैरेलाई अध्यक्षका लागि अगाडी सारेको छ ।
श्रेष्ठलाई काँग्रेसलगायत केही साना दलहरुको समर्थन रहेको छ भने गैरेलाई एमालेलगायत नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन गरेको जनाइएको छ । गैरे र श्रेष्ठमध्ये कसले संघको नेतृत्व गर्ने हुन् ? एक हजार सात सय ब्यबसायीले उनीहरुको भविष्य निर्धारण गर्ने छन् ।
नेपाली काँग्रेसले अघि सारेका श्रेष्ठ यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्र र दोस्रो पटक नेकपा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष पदमा पराजित भएका थिए । यद्यपि यस पटक श्रेष्ठलाई नेपाली काँग्रेसले विश्वास गरेको छ र अध्यक्ष पदमा चुनावी मैदानमा रहेका छन् ।
जति नै पार्टी परित्याग गरेर अन्य पार्टीमा गए पनि देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघका तीन पटक अध्यक्ष पदमै चुनावी मैदानमा जाने सम्भव त एक्ला ब्यबसायी हुन् । उनले ब्यबसायी हकहितका लागि काम गर्ने गरी अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्व चयनका लागि भोली निर्वाचन हुदैछ । – नेपालीपत्रबाट साभार